Garoowe : Michael Walls oo booqday Libraryga Puntland, kulanna la qaatay howlwadeenadda SFS (Sawirro). | Sahan radio
Garoowe : Michael Walls oo booqday Libraryga Puntland, kulanna la qaatay howlwadeenadda SFS (Sawirro).
Garowe (SR): Michael Walls oo ah Cilmi baare ku xeeldher dhanka nidaamka axsaabta badan kana soo shaqeeyey meelo kala duwan oo Africa ah ayaa dhawaan soo gaaray deegaanada Puntland,waxaana uu maalmahan kulamo la lahaa Madaxda Dowladda Puntland,Gudiga Kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland (TPEC) iyo bulshada rayidka ah,waxaana uu booqasho kusoo gaaray Xarunta Libraryga Puntland ee Garoowe oo uu kalamo kula yeeshay qaar ka tirsan howlwadeenadda Somali Family Services .
Michael waxaa uu kulan la qaatay Xubno ay ka midyihiin Madaxa Libraryga Puntland ahna siihaya Agaasimaha SFS Jamal Cilmi waxaana ay wada hadleen arrimo ay ka midyihiin :
1. Barnaamijka Geedisocodka hanaanka axsaabta badan ee ay puntland u hayamayso.
2. Aragtida Bulshada rayidka ah ee Barnaamijkan.
3. Doorka Somali Family Services ee Dimocracyga
4. Farqiga u dhaxeeya Nidaamka axsaabta badan iyo kan iminka puntland ku dhaqanto.
Howlwadeenadda Somali Family Services ayaa sheegay in ay door muhiim ah ka qateen nidaamkan iyo sidii uu ku tabogeli lahaa iyadoo ay xuseen in ay qabteen tababaro,Shirar,Kulamo iyo Wacyigelino ku adan sidii bulshada loo fahamsiin lahaa hanaanka dimoqradiyeynta Puntland & bulshadeedu u guurtay,waxaana uu booqday barnaamijyadda & wararka uu dabacay websiteka Sahanradio.org oo ah warsidaha Idaacadda SAHAN ee ka mid ah barnaamijyadda ay SFS bulshada u soo kordhisay.
Kulanka oo mudo Saacad ah socday ayaa waxaa ay masuuliyiintani isku waydaarsadeen figrado iyo talooyin badan oo ku adan sida loo horumarin karo nidaamkan & kaalinta ay ka qadanayso Somali Family Services .
Michael waxaa uu kormeeray qaybaha uu ka koobanyahay Libraryga Puntland ,waxaana uu dhanka akhriska buugaagta kula kulmay arday dhigata jaamacadaha Maxaliga ah ee Puntland ee ay ka midyihiin PSU,EAU & BOSASO UNIVERSITY kuwasoo ku guda jiray akhriska buugaagta,waxaana uu waydiiyey su,aalo ay kamidyihiin.
1. Kulliyadaha ay dhigtaan,
2. Sida ay u arkaan nidaamka Dimoqradiyeynta Puntland.
3. Waxaa ay ka yaqaaniin Codaynta hanaanka xisbiyada Badan.
Waxaana ay ka dhiibteen fikirkooda ku adan barnaamijka iyadoo ay sharaxeen farqiga u dhaxeeya Nidaamka Axsaabta badan iyo kan Qabiilka wax lagu soo xulo .
Michael waxaa uu xilliyo kala duwan kor jooge ka ahaa doorashooyinka nidaamka xisbiyadda badan ee ka dhacday Maamulka la magacbaxay Somaliland.